2010 KTM 300 XC-W Review – | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (35258)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11011)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9546)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8110)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7133)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, Review, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6223)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5781)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5658)
နေအိမ် → KTM → 2010 KTM 300 XC-W ဆန်းစစ်ခြင်း -
19 ဇွန် 2015 | Author: dima | ဟာ Off comments အပေါ် 2010 KTM 300 XC-W ဆန်းစစ်ခြင်း –
Off-road racing is huge right now, cross-တိုင်းပြည်နှင့် Endurocross-ပြိုင်ကားစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းစ moto မီဒီယာနဲ့ပေါက်. In those stories, look closely at the photos. Chances are you’ll see one bike more often than anything else: အဆိုပါ KTM 300 XC, or its wide-ratio transmission brother, အဆိုပါ 300 XC-W.
အဆိုပါ 300 starts easily, but in case you are really lazy it has the magic button. Yup, E-start onatwo-stroke! That may sound pointless at first, but as you’ll find out we loved that feature!
Speaking of motocross, this bike would kill in age or ladies classes where there is no displacement rule. It will run with the 450s, starts withapush of the button and is lighter and easier to ride thana250F but much more powerful. နေဆဲ, the suspension is purposely ‘middle of the road’, aimed more at cross-country racing more than motocross.
What we have here isabike that needs very careful setup, but is totally capable of winning any type of racing you throw at it. Confidence inspiring, အဆိုပါ 300 XC-W is light and responsive – making the rider feel invincible. It doesn’t stall easily, but if you do screw upaflick of the thumb has it running again without losing any time.
Our Pro motocross tester, who normally racesaHonda CRF450R, was so smitten with our test bike that he attempted to buy our test bike from KTM…not just for woods racing but for motocross racing and teaching his motocross schools. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, I hated to give this bike back.
Small-Bore Motocross: KTM 150 SX vs. KTM 250 SX-F ကို – ဖုန် Rider မဂ္ဂဇင်း
စက်ဘီး, Parts, ပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှု, News on all ...
19.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် စက်ဘီး, Parts, ပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှု, အားလုံး Ducati အပေါ်သတင်းများ, KTM နှင့် Husaberg…
Ducati Desmosedici GP11 Ducati Diavel အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ DN-01 ဆူဇူကီး Colleda CO စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး ဆူဇူကီး AN 650 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Aprilia Mana 850 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Bajaj Discover Brammo Enertia သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Ducati 60 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို
Saturday | 20.06.2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Kawasaki Ninja 650R 2012 အိန္ဒိယတွင်စျေး & အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်